alaabaa Archives | Oromia Shall be Free
Tag Archives: alaabaa
Nama qooda guddaa qabsoo Oromootiif gumaachee, garuu waa’een isaa hin himamin yoo jiraate nama suuraa irratti argitan kana; Mohammad Umar Qaadii jedhama. Mohammad Umar …
January 19, 2015	Comments Off on Alaaba Oromoo Ibsiitu dukkanaa, guyyaa si dhabbannee gabrummarraa baanaa!!
April 3, 2013	Comments Off on Ilmaan Oromoo hundaaf
Duraan dursee, baga bara haaraan isin gahe. Barri haaraan kan fayyaa, nagaa, gammachuu fi akkasumas kan tokkummaan ilmaan Oromoo itti milkaawu fi humni keenyas …